मनिषाको 'कमब्याक' फिल्म नेपालमा किन रिलिज भएन?
नेपाली फिल्म खेलेर बलिउड पुगेकी मनिषा कोइराला उता शीर्ष अभिनेत्रीमा गनिइन्। बलिउडका एक से एक मानिने निर्देशकका फिल्म खेलेकी उनले बलिउडका हस्ती मानिने दीलिप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चनदेखि अहिलेका चर्चित तीन खान (सलमान, शाहरुख, आमिर) सँग अभिनय गरिन्।
उतिबेलाकी चर्चित अभिनेत्रीमा गनिने मनिषाको कमब्याक फिल्म ‘डियर माया’ शुक्रबार रिलिज भएको छ। लभ आजकल, रकस्टार, हाइवे, तमासाजस्ता रुचाइएका फिल्मका निर्देशक इम्तियाज अलीका फिल्ममा सहायक निर्देशक हुँदै मनिषालाई कमब्याक गराएर डेब्यु निर्देशन गरेकी सुनैना भट्नाकरको यो फिल्मले हाल बलिउडमा सुखद प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चर्चाले मनिषालाई बलिउडले खुला हृदयले स्वागत गरेको प्रष्ट्याउँछ। बधाई र शुभकामनाको ओइरोसँगै समीक्षकबाट मिलिरहेको राम्रो समीक्षाले मनिषाको कमब्याकलाई सफल मान्न सकिन्छ।
तर, नेपाली दर्शकले भने मनिषाको कमब्याकलाई आफ्नो ठाउँमा स्वागत गर्न पाएनन्।
त्यसो त, यसअघि उनले 'धर्मा'बाट नेपाली फिल्ममा गरेकाे कमब्याक भने सफल भएको थिएन।
तर, जब उनलाई क्यान्सर लाग्यो, वैवाहिक सम्बन्ध पनि छोटो समयमै टुंगियो- केही समय उनका कुनै अभिव्यक्ति सुनिएनन्। जब उनले यी सबैबाट मुक्ति पाइन्, उनका अभिव्यक्तिमा जीवनबारे गहिरा बुझाइ घुलिएर आए। उनी धेरैका लागि उत्प्रेरणाको पात्र बनिन्। अझ भुइँचालोपछि देखाएको सक्रियताले मनिषा र नेपाली समुदायबीच पहिलेभन्दा सम्बन्ध गाढा बन्यो। सँगै, क्यान्सर, वैवाहिक जीवन छिट्टै तोडिएका जस्ता कुराले भने उनीप्रति सहानुभूति पनि जोडियो।
यस्तै-यस्तै कारणले मनिषाको फिल्मलाई नेपालले पनि खुला हृदयले स्वागत गर्ने धेरैको अनुमान थियो।
तर, नेपाली पर्दामा किन रिलिज भएन त?
बलिउड फिल्मको वितरण गर्दै आएका फिल्म व्यवसायी मनोज राठीले व्यावसायीक रुपमा उति सफल नहुने खालको भएका कारण आफूले उति चासो नदिएको बताए। डियर माया नेपाल ल्याउने/नल्याउने बारे नै नसोचेको उनको भनाइ छ।
बलिउड फिल्म वितरणमा वर्षौंदेखि सक्रिय गोपिकृष्ण मुभिजले भने तत्परता देखाएकाे रहेछ। तर, विक्रेता कम्पनीले मनिषाको जन्मभूमि नेपालमा डियर मायाले धेरै व्यापार गर्ने ठानेर उच्च मूल्यको अपेक्षा गरेकाले आफू पछाडि हच्किएको गोपिकृष्ण मुभिजका सिइअो निरज पौडेलले बताए। ‘हामीले प्रक्रिया नचालेका होइनौं, तर अपेक्षा उच्च सुनियो,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘अपेक्षा ठूलो सुनिएपछि जोखिम मोल्न चाहेनौं र गम्भीरतापूर्वक कुरा अगाडि बढाएनौं। हामीले यसअघि ल्याएका बाहुबली र हाफ गर्लफ्रेन्ड राम्रै चलिरहेका छन्। यसपाली हलिउडको बेवाँच ल्यायौं। यी फिल्म नै हाम्रो हलका लागि पर्याप्त हुने ठानेपछि डियर मायालाई महँगो मूल्य तिर्न हामी अग्रसर भएनौं।'
त्यस्तै, धेरै दर्शक बटुल्ने मल्टिप्लेक्स क्युएफएक्सअन्तर्गतको ‘टिमक्वेस्ट’ले पनि फिल्म वितरण गर्छ। फिल्म प्रदर्शनलाई मुख्य व्यवसाय बनाएको टिमक्वेस्टले एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट नामको छुट्टै कम्पनीमार्फत् फिल्म वितरण गर्छ। क्युएक्सअन्तर्गत धेरै हल भएकाले पर्याप्त फिल्म नपुगेको खण्डमा टिमक्वेस्ट वितरणमा अघि सर्ने सिइओ रोशन अडिगाको भनाइ छ। नेपालमा राम्रो व्यापार गर्न सक्ने ठानिएका फिल्म अरु वितरण कम्पनीले नल्याएपछि एप्पल आफैं तम्सिने गरेको उनले बताए।
त्यसैले डियर माया पनि एप्पलले नै ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अरु कसैले नल्याएपछि हामीले पछिल्लो समयमा डियर माया रिलिज गराउने प्रयास ग¥यौं,’ अडिगाले भने, ‘पछिल्लो समयमा भएकाले प्रक्रिया पुरा गर्न ढिला भएको हो। यसै हप्ता रिलिज गर्ने सम्भावना छ।’ उनले दर्शकले पनि मनिषाको फिल्म किन नल्याएको भन्नेजस्ता गुनासो सुनिरहेकाले नेपाली पर्दामा डियर माया राम्रो चल्ने विश्वास बढेको बताए।
सामाजिक सन्जालमा डियर मायाको प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेकाले नेपाली दर्शकले मनिषालाई नेपाल रिलिजबारे सोधिरहेका छन्। ट्विटरमा एक दर्शकको प्रश्नमा मनिषाले उत्तर दिएको छन्- निर्माता र नेपालका वितरकबीच कुरा भइरहेको छ। अाशा गरौंं- नेपालमा चाँडै रिलिज हुनेछ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०७४ १३:१२:२७